🥇 Ukuphendula ngezimali malunga nokuzaliseka kwee-odolo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 268
Ividiyo ye-accounting yokuzaliseka kwee-odolo
Uku-odola ingxelo yokuphunyezwa kwee-odolo
Umphathi ngamnye okhathalela inkampani yakhe ulawula zonke iinkqubo zemveliso, ukugcina umkhondo wokuzaliseka kwee-odolo, ukwenza lula kunye nokuphucula umsebenzi wombutho kunye nabasebenzi, ukunciphisa iindleko. Kuphela ngolawulo olupheleleyo nolungagungqiyo, ulawulo, kunye nokuzalisekiswa kwazo zonke iiodolo zolawulo, kunokwenzeka ukufezekisa iinjongo ezibekiweyo kunye nokonyusa imveliso kwaye kwangaxeshanye inzuzo. Kweli nqanaba lenkqubela phambili yetekhnoloji, kuthathelwa ingqalelo ukhuphiswano oluqhubeka lukhula, kuyafuneka ukwazisa inkqubo ezenzekelayo ekufezekiseni iiodolo, ukunciphisa ixesha elichithwe kunye nezixhobo zemali. Kodwa, lumka kakhulu xa ukhetha inkqubo yobalo-mali, kuba ayifanele ukuba ikhawuleze kuphela, kodwa ikwizinga eliphezulu, izenzekelayo, isebenzise izinto ezininzi kunye nabasebenzisi abaninzi, ngelixa ingabizi kakhulu kwaye kungcono ngokungabikho kwemali yenyanga. Ngaba ucinga ukuba akunakwenzeka ukufumana inkqubo yobalo? Akulunganga. Inkqubo yethu ekhethekileyo yeUSU Software iyazifezekisa iimfuno zomsebenzisi okhethileyo onolwazi olusisiseko lwesoftware, notyalo mali oluncinci. Inkqubo yobalo-mali iqhelanisa ngokukhawuleza nomsebenzi ngamnye, ithathela ingqalelo iminqweno yobuqu kunye nezikhundla zomsebenzi. Imowudi yabadlali abaninzi nayo ayikugcini ulindile kwaye ivumela ukugcina imali kwizicelo ezongezelelweyo. Ixabiso eliphantsi, xa kungekho ntlawulo yenyanga, ikwahlula inkqubo yethu kwiinkqubo zokuzalisekiswa kweeodolo ezifanayo.
Owona msebenzi uphambili kwishishini ngalinye kukuphendula kunye nokulawula iiodolo. Kukuphumeza kwabo ngexesha elifanelekileyo kunye nokulawula ukuhlawula ngaphezulu okusisiseko kunye nokuphucula ubudlelwane bokuthembela kubathengi, kwaye oku sisitshixo sempumelelo. Inkqubo yethu ezenzekelayo ivumela ukuzenzekelayo zonke iinkqubo zemveliso, ukuhlalutya kunye nokwenza ngokufanelekileyo imisebenzi egqitywe ngexesha, kuthathelwa ingqalelo izaziso ezazifunyenwe ngaphambili, ngenxa yobalo-mali kumcwangcisi womsebenzi. Yiyo loo nto, ngenxa yenkqubo yobalo lwekhompyuter, ukuzalisekiswa kwemisebenzi zizicelo ezincitshisiweyo, kuthathelwa ingqalelo imeko yabantu (ukungakhathali, ukudinwa, njl. Ngokusebenza iiyure zomsebenzi, awulawuli kuphela imisebenzi yabasebenzi, ngokusekwe kumvuzo obalwayo, kodwa uqeqesha abasebenzi.
Ukugcina iitafile ezahlukeneyo kuvumela ukungena kolwazi ngomgangatho ophezulu kunye nokulugcina iminyaka emininzi. Ukungenisa idatha kwenziwa kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, engazisi nje ulwazi kwangoko kodwa kwanomgangatho. Oku kuyinyani ngakumbi xa usebenza nge-odolo ze-elektroniki, ezithi zihanjiswe ngokuzenzekelayo kwiitafile nakwiijenali eziyimfuneko, zibonelela ngokufikelela kubasebenzi ngokusekwe kwindawo yomsebenzi. Ngoku ayizukuthatha ixesha elininzi kunye nomzamo wokufumana izixhobo ozifunayo, kuthathelwa ingqalelo ukusetyenziswa kweinjini yokukhangela imeko.
Ngapha koko, i-Software ye-USU yenza imisebenzi emininzi kwaye inokuncediswa kwiimodyuli ezahlukeneyo ngokwesicelo sakho, ezinokufumaneka kwiwebhusayithi yethu. Kukho uluhlu lwamaxabiso kunye nenkcazo yeenkqubo, kunye nohlaziyo lwabathengi. Kwimibuzo eyongezelelweyo, abacebisi bethu bayonwabile ukukucebisa ngeenombolo zefowuni ezichaziweyo.
Ugcino-zincwadi lokufezekiswa kwenkqubo yoku-odola kuqinisekisa ukhuseleko oluthembekileyo kunye nolawulo lwentsebenzo iyonke. Ukusebenza okuzenzekelayo komsebenzi kunye nenkqubo yezicelo kubonelela ngemisebenzi emininzi. Ukuzalisekiswa kweeodolo ezahlukeneyo, kuthathelwa ingqalelo ulondolozo lweetafile ngeendlela ezahlukeneyo. Inkqubo yobalo inezinto ezininzi ezichaziweyo njengezaziso kunye nezikhumbuzo, ukuzalisekiswa kweeodolo, isicwangciso somsebenzi, ukungena kwedatha ngokuzenzekelayo kunye nokungenisa, ukugcina kunye nokubalwa kwemali, umsebenzi okude usebenzisa usetyenziso lweselfowuni, ukwahlula amalungelo omsebenzisi, ukugcinwa, kunye ukuqhubekekiswa kwedatha kwiseva ekude, efanelekileyo kunye nekhampasi kuzo zonke iindlela zonxibelelwano, kuyaqondakala kuwo wonke umsebenzisi, kusebenza ngemiyalelo ye-elektroniki kunye nokuzalisekiswa kokusebenza, ukubeka esweni imeko yokuqhubekeka, ijelo lokufikelela labasebenzisi abaninzi xa unikezela ngokungena kunye negama lokugqitha. Ukuphucula uqeqesho ngokubeka iliso rhoqo kunye nokunika ingxelo ngemisebenzi yabasebenzi, kusetyenziswa ukulandelela ixesha kunye nokudityaniswa kweekhamera zevidiyo.
Into eluncedo ine-accounting efanelekileyo kunye nokuhamba. Uhlalutyo kunye neenkcukacha-manani zenziwa ngokuzenzekelayo. Iintlawulo zinokwamkelwa ziyimali ezinkozo kwaye aziyiyo imali. Ngokweziphumo zomsebenzi wabasebenzi, imivuzo ibalwa. Unokufumana ulwazi ngokukhawuleza, uthathela ingqalelo imeko yokukhangela.
Okwangoku, ulawulo lobudlelwane babathengi olusebenzayo ngokuthe ngcembe luba sisicwangciso sobukho obunempumelelo kunye nophuhliso ngakumbi lweenkampani zangoku. Ukugxila kweenkampani ekuphuculeni ubudlelwane babathengi kungenxa yeendlela ezininzi, ngakumbi ukwanda kokhuphiswano, ukwanda kweemfuno zabathengi kumgangatho weemveliso ezibonelelweyo kunye nenqanaba lenkonzo, ukwehla kokusebenza kwezixhobo zemveli zokuthengisa, kunye nokuvela Itekhnoloji entsha yokunxibelelana nabathengi kunye nokusebenza kwezahlulo zenkampani. Kungenxa yoko le nto ingxaki yokulungiselela kunye nokuqinisekisa ukusebenza okusebenzayo kunye nabaxumi ingxamisekileyo. Oku kunyanzelisa iimfuno zayo kumgangatho wenkonzo, kwaye okokuqala kuzo zonke izinto ezinje ngesantya senkonzo yabathengi, ukungabikho kweempazamo, kunye nokufumaneka kolwazi malunga nonxibelelwano lwabathengi bangaphambili. Ezo mfuno zinokuhlangatyezwa kuphela kusetyenziswa inkqubo yokulungisa idatha ezenzekelayo. Kwimakethi yesoftware yanamhlanje, kukho inani elikhulu leenkqubo zokurekhoda ukuzaliseka kweeodolo, ukubala inani lezaphulelo kunye nezibonelelo, kodwa uninzi lwazo lujolise kwindawo ebanzi kakhulu kwaye awuthatheli ngqalelo izinto ezithile ishishini. Ezinye zazo zisilela ekusebenzeni okuyimfuneko, ezinye zinemisebenzi 'eyongezelelweyo' ekungekho ndawo yokuhlawula kuyo, konke oku kufuna ukuba umntu aphuhlise isoftware kwiimfuno zombutho. Nangona kunjalo, kwisakhiwo esiyilelwe ngokukodwa kwi-USU Software, uya kufumana kuphela ezona zinto zibalulekileyo neziluncedo kuwe nakubathengi bakho.